Xayeysiisyadii 80-maadkii: Xayeysiisyadii 80-maadkii ugu wacnaa iyo astaamahooda | Hal-abuurka khadka tooska ah
Xigasho: Grog's Tavern
Waxa jira xayaysiis awood u leh in ay soo jiitaan dareenkayaga oo aynu indhaheena ku hagaajinno ujeeddaduna tahay iibsashada ama iibinta alaabta gaarka ah. Aduunyada xayaysiisyadu waa mid aad u weyn oo aynaan waligeen u malaynayn in mid iyaga ka mid ah uu soo afjarmi karo.
Taasi waa sababta, taariikhda oo dhan, xayaysiisku wuxuu la wadaagay waqtiyo aad u wanaagsan oo aan sidaas ugu wacnayn bulshada dhexdeeda. Si aad u badan, in magacyo badan ay ku sharxayeen warbaahinta xayeysiinta tobannaan sano ama xitaa sannado badan. Qoraalkan waxaan u nimid inaan ka hadalno xayeysiinta, laakiin maaha oo kaliya wax dacaayad ah sida erey-bixinteeda loo tixraacayo, laakiin taa beddelkeeda laga soo bilaabo xayeysiisyadii 80-kii.
Toban sano oo ay ka buuxaan horumar iyo kacdoon bulsho. Dhaleecayn iyo rajo in la helo horumar kasta oo ka mid ah horumarka iyo bannaanbaxyada waaweyn.
1 Xayeysiisyada: maxay yihiin?
2 Xayeysiisyadii 80-kii
2.1 Astaamaha xayeysiiska 80-kii
2.1.2 kuwa aan faafreeb lahayn
2.1.3 Midabo iyo xarfo adag
2.1.4 tayada sawirka
3 Xayeysiisyadii ugu wacnaa ee 80-maadkii
3.1 La Casera xayeysiis
3.2 Xayeysiiska Golf Volkswagen
3.3 Schweppes Tonic xayeysiis
3.4 Tuuna fudud ad
Xayeysiisyada: maxay yihiin?
Xayeysiisyada dadweynaha waxaa lagu qeexaa fariimo yaryar oo muddo aad u gaaban ah. lagu gartaa ka kooban yahay ujeeddooyin ganacsi oo loogu talagalay in lagu hormariyo ama lagu iibiyo, badeecad gaar ah. Xayeysiisyada waxaa lagu soo bandhigi karaa ama waxaa lagu sii dayn karaa warbaahin ama taageerooyin kala duwan, waxay noqon karaan kuwo qoran, dhawaaq ama xitaa maqal muuqaal ah.
Waxa kale oo lagu gartaa xayeysiisyadu waa in ay had iyo jeer ku xidhan yihiin suuqgeyn. Suuqgeyntu waa hab ay suurta gal ku tahay in sumad gaar ah lala meel dhigo badeecada suuq gaar ah.. Waad ku mahadsan tahay suuq-geynta, noocyo badan ayaa kordhiyey qiimahooda mints waxayna ku yeesheen koboc weyn warshadahooda.
Waxaa jira astaamo lagu garto xayeysiisyadaas, qaarkood waa muhiim in lagu xisaabtamo si loo ogaado si toos ah waxa xayeysiisyadan laga sameeyay iyo sida ay u kiciyeen.
Xayeysiisyadu waxay ku saabsan yihiin qeex badeecad gaar ah ama calaamad gaar ah. Sidan oo kale waxay isku dayaan inay macmiilka ama daawadayaasha u sheegaan waxa ay arkayaan oo ay isku dayaan inay ku qanciyaan oo ku qanciyaan inay iibsadaan alaabta gaarka ah. Tani waxay noqon doontaa aynu nidhaahno ujeeddada ugu weyn ama saldhigga ugu weyn ee xayeysiisyada.
Caadi ahaan waxay ka kooban yihiin waxyaabo garaaf ah ama xubno aad u xiiseeya oo maamula inay dadweynaha ka dhaadhiciyaan. Tusaale ahaan, isticmaalka sawirada sida ilaha ugu muhiimsan. Si tan loo sameeyo, waxay leeyihiin sawirro qaar oo maamula inay ku xidhmaan daawadayaasha.
Hadda, xayaysiisyada marin habaabinta ah ayaa si aad ah loo ilaaliyaa, taas oo ah horumar weyn. Sannado ka hor, telefishinno badan ayaa la galiyay xayaysiis kuwaas oo doonayey kaliya inay la wareegaan lacag iyo muuqaalo ama iibsi.
Waxaa jira noocyada kala duwan ee advertising, laakiin kuwa ugu caansan waxaan ka heleynaa: shucuur, isbarbardhig, dabeecad ama jilayaal, markhaatiyaal, iwm. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waxa ay ka fikiraan sifooyin kala duwan halka ay ku saabsan tahay qancinta ama qancinta si ka duwan.
Inta badan ololayaal xayaysiisyo badan ayaa isticmaala shaqada soo jiidashada shucuurta maadaama ay yihiin kuwa sida ugu fiican u soo jiidanaya dadweynaha. Sababtoo ah haddaynu ka hadalno cilmi nafsiga aadanaha. Qofka bini'aadamka ah ayaa had iyo jeer ku guulaysta inuu kiciyo, xitaa haddii ay tahay sabab ama sabab la yaab leh. Shaki la'aan, adduunka xayeysiisku wuxuu noqonayaa mid la yaab leh maalin kasta.
Xigasho: Hal-abuurka Hal-abuurka
Dhammaadkii 80-meeyadii iyo 90-meeyadii, wadamada sida Spain, xayaysiisyadu waxay bilaabeen in ay hadhkooda ka kacaan oo ay arkaan xiisaha dadweynaha oo sii kordhaya. Sidaas darteed xayaysiisku wuxuu ku faafay warbaahin kala duwan, oo ay ku jiraan raadiyaha iyo telefishinka.
Ma jirin maalin, halkaas oo dadweynuhu aysan isticmaalin telefishinka si ay u daawadaan xayeysiiska. Waana taas in xayaysiisku, sida aynu maanta u naqaanno, ay qayb ka tahay taariikhda aadka u xiisaha badan, gaar ahaan marka laga soo bilaabo wakhti lagu soo rogay horumarro waaweyn iyo kacdoonno, mid bulsho iyo mid siyaasadeedba.
Astaamaha xayeysiiska 80-kii
Haddii uu jiro hal shay oo aan hubno, waa xayeysiisyadii 80-kii waxay ku sifoobeen adeegsiga fariimaha tooska ah iyo kuwa la xoojiyay. Qaar badan oo ka mid ah xayeysiisyada ayaa la socday fariinta iyada oo leh heeso yar oo gadaal ah, taas oo u ekayd laxan yar oo soo jiidasho leh oo madaxeena ku sugnaa inta maalinta ka hadhay.
Waqtigaas, badeecada lama siinin wax caan ah, laakiin halkii fariinta ka dambeysa. Sababtan awgeed, magacyo badan ayaa hadda go'aansada inay isticmaalaan agabyo kale sida laxan soo jiidasho leh iyo halkudhig toos ah.
kuwa aan faafreeb lahayn
Waqtigaas, faafreebku waxa uu ahaa mid dhab ahaan aan jirin dhinacyada qaarkood. Tusaale ahaan, naagta waxaa loo isticmaalaa sidii qof dumar ah oo guriga ah waxaana jiray khilaaf aad u badan maadaama doorar guul iyo soo jiidasho leh la soo saaray. Si kastaba ha ahaatee, doorarkaas cidina ma daah-furin, in dad aad u tiro yar, haddii aanay cidi ahayn, ay ka hadleen xayaysiisyada noocaan ah. Faafreeb ma jirin, muuqaalkuna wuu toosnaa. Farriinta ayaa weli toos ahayd, daawadayaashana waxaa looga tagay wixii loo baahnaa oo kaliya, iyada oo aan loo baahnayn in la isku daro waxyaabo kale.
Midabo iyo xarfo adag
Si ka duwan xayaysiisyada aan sida caadiga ah aragno maanta, xayeysiisyada 80-meeyadii waxaa lagu raray midabyo dhalaalaya oo dhalaalaya. Kaliya waa inaad dib ugu noqotaa 40 ama 50 sano si aad u ogaatid, xayeysiisyada sida Fanta, liinta dhalaalaya iyo jaalaha ayaa loo isticmaalay si loo xoojiyo badeecada iyo goobta.
Sidaa darteed, sawirku wuxuu ahaa mid aad u xiiso badan, oo ka buuxa iftiin iyo midabyo xooggan. Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda xarfaha, khasnadaha ayaa ku sharma xarfaha muuqda iyo hal-abuurka hal-ku-dhegyadooda, maadaama ay ahayd hab wanaagsan oo lagu soo jiidan karo dareenka dadweynaha.
Dabcan, muuqaal kale oo muujinaya taas waxaa mahad leh horumarka tignoolajiyada, hadda ma suurtowdo. Waa tayada sawirka. Waqtigaas ma jirin kamarado leh tikniyoolajiyad isku mid ah iyo xallinta hadda jirta, waana wax lagu mahadiyo, maadaama badeecadu ay ahayd mid aad u yar oo faahfaahsan oo goobta ayaa gebi ahaanba mugdi ah.
Shaki la'aan, tignoolajiyada iyo xayeysiinta ayaa sidoo kale gacanta isla galay waxayna ahaayeen laba waji oo calaamadeeyay ka hor iyo ka dib qaybta xayeysiinta.
Xayeysiisyadii ugu wacnaa ee 80-maadkii
La Casera xayeysiis
Haweeneyda guriga leh, cabitaanka fudud ee caanka ah, waxay abuurtay xayeysiis bartamihii 80-meeyadii. Abuuraha, José Luis Zamorano, ayaa dhajiyay mid ka mid ah xayeysiisyada ugu fiican wuxuuna helay abaalmarino badan. Si aad u badan ayaa lagu abaalmariyay inay tahay goobta ugu fiican ee xayeysiinta sanadka by Festival Advertising ee magaalada San Sebastian ee 1986.
Xayeysiintu waxay xoojisaa muhiimada badeecada, iyada oo soo jiidanaysa in ay tahay cabitaanka ugu fiican, si aad u badan haddii cabitaanka uusan ka jirin shir, kulanka ayaa isla markiiba la joojiyay.
Xayeysiiska Golf Volkswagen
wolswagen Waa mid ka mid ah noocyada baabuurta ee lagu daray in ay fuliyaan ololihii ugu fiicnaa ee 80-meeyadii. Waxay ahayd mid ka mid ah xayaysiisyada ugu xiisaha badan, isla markaana soo jiitay dareenka dadweynaha, sababtoo ah shirkadu waxay isticmaashay sawirka shahwada si ay u waarto xayeysiiska. Daawadeyaashu ma rumaysnayn ku dhawaaqista noocaas ah. Ilaa iyo inta halku-dhiggu uu cinwaankiisu ahaa «Tan iyo markii aad aad iyo aad u yaraa waxa aad jeceshay in aad marka hore timaado. Ma fahantay sababta aad hadda u jeceshahay Golf GTI? Shaki la'aan, mid ka mid ah halkudhigyada ugu guulaha badan.
Schweppes Tonic xayeysiis
Bartamihii 80-meeyadii, nin la odhan jiray Benard Le coq waxa uu kumannaan Isbaanish ah ka dhigay jacaylka Schweppes tonic. Ilaa wakhtigaas, qofna ma qaadan ama cunin alaabtan. Waxay ahayd markii la bilaabay xayeysiinta, markii kumanaan qof ay bilaabeen inay cunaan iyaga oo aan joogsan. Waa mid ka mid ah meelaha ugu yaabka badan uguna shaqaynta badan ee dib loo abuuray oo la sameeyay. Sidoo kale, ha filanin in xayeysiisyada ugu fiican ay had iyo jeer ka imanayaan heer sare oo qancin ah. Shaki la'aan waa mid ka mid ah xayeysiisyada soo jiitay dareenka dadweynaha.
Tuuna fudud ad
Xayeysiiska astaanta caanka ah ee Tuna, Claro Calvo, ayaa lahaa fikradda samaynta xayaysiis lahaa hees soo jiidasho leh oo qof kastaa awood u yeelan karo inuu xasuusto. Sidoo kale waa mid ka mid ah xayaysiisyada ugu wanagsan ee waagaas waana mid ka mid ah ammaanta aadka loo xasuusto shaki la’aan.
Marka la soo koobo, kuwani waxay ahaayeen qaar ka mid ah xayaysiisyadii ugu fiicnaa ee 80-meeyadii, waxaa jira kuwa kale sida Coca Cola, halkaas oo uu sidoo kale ku daray inuu abuuro ogeysiisyo aad muhiim u ah oo hal abuur leh. Kaliya waa inaan isbarbar dhignaa ogeysiisyadan iyo kuwa hadda si aan u ogaanno inta aan horumarinay.
Waxa jira xayaysiisyo badan oo soo jiray sanado badan iyo tobanaan sano. Laakiin sidoo kale waxaa jira kuwo badan oo aad u yar isla waqti isku mid ah, kuwa calaamadeeyay ka hor iyo ka dib xilliga xayeysiinta. Sidaa darteed, waa muhiim inaad diiwaan geliso naftaada maadaama ay sheeko ka dambeeyaan.
Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado in qaar badan oo iyaga ka mid ah ay leeyihiin saameyn bulsho iyo mid siyaasadeed labadaba. Hadda waxa la gaadhay wakhtigii aad baadh lahaydeen oo aad ogaan lahaydeen kumanaanka iyo kumaankunka farriimaha ee qarsoon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Xayeysiiskii 80aadkii
Taariikhda astaanta Lacoste